नोभेम्बर ८ पछि अमेरिका प्रवेशमा भ्याक्सिन अनिवार्यको नियमबारे ७ प्रश्नको जवाफ « Khasokhas Follow @khasokhasmag
आगामी नोभेम्बर ८ पछि अमेरिका प्रवेशका लागि भ्याक्सिन अनिवार्य गरिएको छ । भ्याक्सिनको पूर्ण डोज लगाएका विदेशीहरुलाईमात्र अमेरिका प्रवेश दिइनेछ, अन्यले प्रवेश पाउनेछैनन् ।
कस्ता व्यक्ति अमेरिका आउन पाउनेछन् ?
भ्याक्सिनको पूर्ण डोज लगाएका विदेशीहरुलेमात्र अमेरिका प्रवेश पाउनेछन् । जसको अर्थ एउटामात्र डोज लगाउनुपर्ने जोन्सन एण्ड जोन्सनको डोज लगाएको १४ दिन र अन्य भ्याक्सिनको दोश्रो डोज लगाएको १४ दिन पूरा भइसकेको हुनुपर्छ ।
कुन कुन भ्याक्सिन स्वीकार गरिनेछ ?
अमेरिकाले अमेरिकामा एफडीएबाट स्वीकृत र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट स्वीकृत भ्याक्सिनलाईमात्र मान्यता दिने भएको छ । जस अनुशार चाइनिज भ्याक्सिनहरु साइनोफार्म (भेरोसेल) र साइनोभ्याक (कोरोनाभ्याक) लगाएकाहरुले अमेरिका प्रवेश पाउनेछन् भने रसियन भ्याक्सिन स्पुत्निक भी लगाएकाहरुलाई भने अमेरिका प्रवेश दिइनेछैन ।
भ्याक्सिन नलगाएका अमेरिकन नागरिकलाई पनि रोकिनेछ?
नोभेम्बर ८ पछि भ्याक्सिन नलगाएका अमेरिकनहरुलाई समेत अमेरिका प्रवेशमा कडा नियम लागु गरिने भएको छ भने भ्याक्सिन नलगाएका गैर अमेरिकनहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ ।
भ्याक्सिन नलगाएका अमेरिकनहरुलाई नोभेम्बर ८ पछि पनि अमेरिका प्रवेश त दिइने छ तर उनीहरुले अमेरिका फर्कने विमान चढ्नुभन्दा एक दिन अगाडि कोरोनो परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट ल्याउनुपर्नेछ । साथै उनीहरु अमेरिका आइसकेपछि पनि कोरोना परीक्षण लगायतका अतिरिक्त नियमहरुको पालना गर्नुपर्नेछ ।
भ्याक्सिन नलगाएका बालबालिकाहरुको के हुन्छ ?
भ्याक्सिनका लागि योग्य नभएको उमेरका बालबालिकाहरुका लागि यो नियम लागु हुनेछैन । उनीहरु भ्याक्सिन नलगाएपनि अमेरिका आउन पाउनेछन् । विदेशी नागरिकका बालबालिकाहरु र अमेरिकन नागरिकका बालबालिकाहरुका लागि एउटै नियम लागु हुने नहुने स्पष्ट छैन ।
बालबालिकाहरुका सन्दर्भमा धेरै कुरा नबताइएपनि कोरोना परीक्षण लगायतका कैयन नियमहरु भने लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकामा १२ बर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरुका लागि भ्याक्सिन स्वीकृत गरिएकाले उक्त नियमको पालना कसरी हुने भन्नेबारे आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भ्याक्सिनका मिश्रित डोज लगाएकाहरुबारे के हुन्छ ?
भ्याक्सिनको मिश्रण डोज लगाएकाहरुलाई स्वीकार गरिने सीडीसीले जनाएको छ । अमेरिकामा भ्याक्सिनको मिश्रित डोजका लागि सरकारले औपचारिक अनुमति भने प्रदान गरेको छैन ।
भ्याक्सिनको मिश्रित डोजमा दोश्रो डोज लगाएको १४ दिनपछि पूर्णमात्रामा भ्याक्सिन लगाएको रुपमा मान्यता दिइनेछ । त्यस्ता यात्रुहरु मिश्रित डोज भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण देखाएर अमेरिका आउन पाउनेछन् ।
के भ्याक्सिन लगाएकाले कोरोना परीक्षण पनि गर्नुपर्छ ?
कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिनको पूर्ण डोज लगाएकाहरुले पनि कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ । विमान चढ्नुअगाडि ७२ घण्टाभित्र सकलन गरिएको स्वाबको रिपोर्टलाईमात्र मान्यता दिइनेछ ।
भ्याक्सिन नलगाएका अमेरिकनहरुका सन्दर्भमा भने ७२ घण्टाभित्र संकलन गरिएको स्वाबको रिपोर्टलाई मान्यता दिइनेछैन । उनीले बढीमा एक दिन अगाडि कोरोनो परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट ल्याउनुपर्नेछ ।
तत्कालै स्थलनाकाबाट भ्याक्सिन लगाएकाहरु प्रवेश गर्दा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छैन । तर जनवरीपछि भने अमेरिकामा कुनै पनि तरिकाबाट प्रवेश गर्दा भ्याक्सिन लगाएको प्रमाण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।
कस्ता व्यक्ति अमेरिका आउन पाउनेछैनन् ?
नोभेम्बर ८ देखि लागु हुने नियमले भ्याक्सिन नलगाएका अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरुलाई अमेरिका प्रवेश बृहत रोक लगाउनेछ । अहिले कोरोना सम्बन्धित यात्रा प्रतिबन्ध नलागेका देशहरुबाट पनि भ्याक्सिन नलगाएकाहरुलाई नोभेम्बर ८ पछि अमेरिका प्रवेश दिइनेछैन ।
अत्यन्तै सिमितमात्रामा मात्र छुट प्रदान गरिनेछ ।